ဖိုးသီးချိုနှင့် နေလသစ္စာတို့၏ သတင်းကျွတ်အထူးလက်ဆောင် ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ဖိုးသီးချိုနှင့် နေလသစ္စာတို့၏ သတင်းကျွတ်အထူးလက်ဆောင် ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်း
ဖိုးသီးချိုနှင့် နေလသစ္စာတို့၏ သတင်းကျွတ်အထူးလက်ဆောင် ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်း
Posted by မြန်မာပြည်သား on Oct 14, 2011 in Celebrity | 26 comments
ဒီပိုစ့်လေးကို ကျွန်တော့စိတ်ကူးနဲ့တင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ yetazar (ခ) တေဇာ ရဲ့စိတ်ကူးလေးပါ ။ ကိုတေဇာက ဂေဇက်စည်းကမ်းကိုဖေါက်ဖျက်မိတဲ့အတွ (၁၀ ) ရက်အဖွဲ့မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံထားရပါတယ် ။ ဒီပိုစ့်ကလေးကို ကိုတေဇာကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်ပေးတာပါ ။ ဒီအတွက် ပိုစ့်ရေးခ ကို သဂျီးအနေနဲ့ မပေးရင်လဲရပါတယ် ။
မန်းဂေဇက်ရွာသူ/ရွာသားများခင်ဗျား ။ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ ။ တစ်ချိန်တုန်းက ဖိုးသီးချိုကိုပြောခဲ့တာဆိုတာ စီးပွါးရေးလုပ်နေတာကိုမနာလိုလို့မဟုတ်ပါဘူး ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကို တောင်းဆိုခဲ့တာပါ ။ ခုတော့ပြည်သူတွေအတွက် ဖိုးသီးချိုနဲ့ နေလသစ္စာက သီတင်းကျွတ်အထူးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါပြီ ။ ဒါကြောင့်မို့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါပြီ။မနေ့ညနေပိုင်းကစပြီးဒီပိုစ့်ကလေးကိုရေချင်ခဲ့တာပါ ။ သံတွဲတံတားကြီးပေါ်မှာ အပေါက်ကြီးကိုလဲ နေလသစ္စာမှ ပြုပြင်ဖာထေးပြီးသွားပါပြီ ။ သွားရေးလာရေးလဲအဆင်ပြေသွားပါပြီ ။ သတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ တံတားပေါ်မှာမီးမလာတော့ တံတားပေါ်မှာမိသားစုလိုက်အပန်းဖြေသူတွေ ၊ ဖြတ်သွားသူတွေအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့ ညနေမှာတော့ ဖိုးသီးချိုကုမ္မဏီက ၀န်ထမ်းတွေမီးတွေဆင်နေတာတွေ့ရပါတယ် ။ ညဘက်ရောက်တော့ ။ တံတားကြီးကျက်သရေရှိလိုက်တာ ။ တံတားပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေ မီးကြီးဖွင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး ။ သွားလာသူတွေလဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့သွားနိုင်ကြပါပြီ ။ ဖိုးသီးချိုကုမ္မဏီက ခုလိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေအတွက်စေတနာရှိလို့လုပ်ပေးတာကိပြည်သူတွေကလ မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး တံတားကြီးမီးပြတ်တဲ့ဘ၀ပြန်လည်မရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားထိမ်းသိမ်းကြမှာပါ ။ ဖိုးသီးချိုကုမ္မဏီနဲ့ နေလသစ္စာကုမ္မဏီတို့ရဲ့ သီတင်းကျွတ်အထူးလက်ဆောင်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး ။ ကြီးပွါးတိုးတက်ကြပါစေ ။
ကျွန်တော် တေဇာပါ ။ မကြာခင်မှာပြန်လာခဲ့ပါ့မယ် ။ ဒီပိုစ့်နဲပတ်သက်တဲ့ကွန်မန့်တွေကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းမပေးနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်ပါ ။ ကျွန်တော်ပြစ်ဒဏ်ခံနေရပါတယ် ။ သဂျီးနှင့်တကွအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ………….. ။ ။
View all posts by မြန်မာပြည်သား →
ဒါဆိုရင်ဒီသံတွဲတံတားကြီးပေါ်မှာအခုကနေစပြီးမီးအမြဲတမ်းရတော့မှာပေါ့နော်…။ လမ်းကြီးလဲချောမွေ့သွား ပြီပေါ့… ။ကောင်းလိုက်တာ..ဒါဆို ရင်ဒါဟာမန်းဂေဇက်ရဲ့ကောင်းမှုလား။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသတင်းဘဲ။ ဒီသတင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲ.. လပြည့်နေ့..လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေပေးကတည်းက.. မန္တလေးဂေဇက်ကလည်း.. ပိတ်ထားသူတွေကို.. အကုန်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့.. ပြောလိုက်ပါဗျာ..
သမတဂျီးဦးသိန်းစိန်ကတော့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သူတွေကို တယောက်တထောင် လမ်းစရိတ် ပေးသတဲ့။ သဂျီးကရော ပွိုင့်တထောင်စီ ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလား…။ ညီညာက ပြည်သာ၏။ သံတွဲသားများ မိမိတို့ အခွင့်အရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါ..။
အင်း အမြဲ ဒီလိုသတင်းတွေပဲ ကြားနေချင်ခဲ့တာပါ ဘယ်နေရာပဲရောက် လူသားအားလုံးအတွက် ကိုယ်ချင်းစာနာချင်းဆိုတဲ့ တရားကို လက်ကိုင်ထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ အရာအားလုံးက အေးချမ်းနေမှာပါ။ ပိုပြီး အေးချမ်းအောင် သဂျီးက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ မန်ဘာအသစ်ဝင်တဲ့သူတွေအတွက် ပွိုင့်တွေ အတော်တိုးပေးထားပြီး လက်ရှိမန်ဘာများအတွက်တော့ နည်းနည်း အတိုးနည်းနေသေးကြောင်း သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ရိုးးးးး ကတိမတည်ပါလား။မဖြစ်သင့်ဘူး. ထားလိုက်ပါတော့။ဒီလူတွေ အကောင်းတော့ မြင်တတ်သေးပါလား။
အဖျက်အမှောင့် ကတော့ ရှိနေသေးပုံဘဲ
” ကျွန်တော်ပြစ်ဒဏ်ခံနေရပါတယ် ။”တဲ့လား၊
ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ ဆိုရင်ကျနော်တို့ သူကြီးဦးခိုင် ခမျာ တော်တော်ဆိုးတဲ့ “position”
သကြိုင်ခီးခီး ဖြစ်ပေသည် ဟု
အဖွဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်ပေးလို့ သဂျီးကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားက သဂျီးကို “position” ဆိုးစေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆရာလို ။ အုပ်ထိန်းသူလို့သဘောထားပြီးပြောတာပါ ။ ကလေးတစ်ယောက် ကျောင်းမတက်ပဲ ဆော့နေရင် ဆရာကရိုက်တာ အဲဒီကလေးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာလေ ။ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်ကလဲ ဂေဇက်စည်းကမ်းတွေဖေါက်မိတော့ သဂျီးရဲ့အပြစ်ပေးတာကိုခံရတာပေါ့ ။ အပြစ်ပေးလို့လဲစိတ်မဆိုးပါဘူး ။ သင့်တော်တဲ့အပြစ်တွေ ချမှတ်ပေးလို့ကျေးဇူးတောင်တင်သေးတယ် ။ ခုပိုစ့်ကလေးက ကျွန်တော် ၀င်ခွင့်မရသေးဘူးထင်လို့တင်လိုက်တာ ။ ခုနကမှ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေမြန်မာပြည်သားလာပြောလို့ ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ခွင့်ရပြီပြောလို့ ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
သံတွဲတံတားကြီး လှပခန့်ညားသွားတာကတော့အမှန်ပါ ။ ခုလဲ ကျွန်တော်သွားကြည့်ဖြစ်တယ် ။ လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေ ။ လေညှင်းခံတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ ။ ဖိုးသီးချိုက၀န်ထမ်းတွေလည်း ညဖက် တံတားပေါ်ကိုသွားကြည့်စေချင်ပါတယ် ။ ကိုယ်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့ပီတိကိုခံစားရမှာပါ ။ ရေဆာနေကို ရွှေပေးတာထက် ရေတစ်ခွက်ပေးတာက ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့လဲ တံတားမှာမီးငတ်နေတာပါ ။ တံတားမှာမီးရလိုက်တော့ ရွှေရတာထက်ပျော်ပါတယ် ။ ကြီးပွါးတိုးတက်ကြပါစေ ။
ဖိုးသီးချိုနှင့် နေလသစ္စာတို့၏ သတင်းကျွတ်အထူးလက်ဆောင်အား..ကျေးဇူးတင်သဗျ..
ထိပ်တုံးရက် မပြည့်သေးဘူး ထင်လို့ လားမပြောတတ်….
သဂျီးထိပ်တုံး အစွမ်းကလဲ..ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ပါကလား..
ဟိဟိ.. ငြိမ်ဆို တုတ်တုတ်တောင် လှုပ်ရဲဘူး ဗျို့
ထိပ်တုံး က အစွမ်းသားကလား
အခတ်ခံရတဲ့သူတွေ ပြန်ပြောပြလို့ .. အမလေးဗျ…
ထမင်းလဲ မကျွေးဘူး တဲ့ ။
မြင်ရကြားရ မင်္ဂလာ သတင်းတွေ မို့ ကောင်းပါတယ်
ကြုံဆုံတွေ့ကြရတဲ့ အခိုက်လေးမှာ အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ကြပါစို့။
မင်္ဂလာပါ ကိုယ့်ညီကို တို့ ရေ။ကျနော် ကအမှားတွေကို အမှန်ပြင်၍ အပြုသဘောဆောင်သော မည်သူ့ ကိုမျှ မနစ်နာစေလိုသော ကွန် မန့် များကိုသာ အစဉ်တစိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလို မေတ္တာထားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဖိုးသီးချို ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လဲ ရှေးကတည်းကပျက်နေတဲ့ မီတာတွေကို တမြို့ လုံးနီးပါး ပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊သစ်ပင်များ ရှင်းလင်းရခြင်း၊လမ်းမီးတိုင်များပြုပြင်ပေးခြင်းတို့ ကို အမြဲတမ်းကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်နေတာကို မိဘပြည်သူများအသိပါ။အမြတ်အစွန်းကျန်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တာကြောင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဖိုးသီးချိုဆီမှလုယူရန်ကြိုးစားထိုးနှက်နေကြတာသိသာပါတယ်။ယခုပို့ စ်ကိုတင်ကြသူတွေက တော့ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များသာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်မြို့ ကလူတွေ သူတလူငါတမင်းတစ်စခန်းထ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ မီးလင်းရေးကော်မတီ အဆက်ဆက်မှာ စက်သုံးဆီခိုးမှု၊မီတာခိုးမှု မြောက်မြားစွာခံခဲ့ရပြီး မအောင်မြင်တာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့တဲ့ လုပ်ငန်းကို ဖိုးသီးချို ကုမ္ပဏီမှ အနစ်နာခံ ကြိုးစား၍အောင်မြင်လာတော့မှ မောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို ရပ်တန့် ၍ ပို၍ကောင်းမွန်အောင် ယခုကဲ့သိူ့ စာများသာရေးသားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
ကျနော် မောင်တုတ်ကြီးရွာပြင်ထုတ်အပြစ်ပေးခံရသော်လည်း စိတ်မပျက်မိပါဗျာ။ လိပ်ကို ကျပိုးဖြစ်အောင်ပြောနေသူများကို ပြောချင်အသိပေးချင်၍သာ ပြောမှားဆိုမှားဖြစ်ခဲ့ရသည့်အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောရမှာက ကျနော့်အလုပ်၊ အရေးယူရမှာ ကသူကြီးတာဝန်မို့ပြောစရာရှိမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောရပါလိမ့် မယ်။မောင်တုတ်ကြီး က ဆက်လက်၍သူတို့ ကိစ္စများကို ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။လူလိမ်၊လူညာတွေကို ဖော်ပြပေးတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ ဗျာ။
အာရက္ခ မြေသားနဲ့.မောင်တုတ် ကြီးရေကျွန်တော်လည်း သီတင်းကျွတ်ဆိုတော့ရွာပြန်ပြီးမိဘတွေ ကို ကန်တော့နေတာနဲ့MGကိုဝင်မကြည့်ဖြစ်တာပါ။ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေလည်းအပိတ်ခံထားရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး မကြည့်ဖြစ်တာပါ။ယခုလည်းသီတင်းကျွတ်မှာသူကြီးနှင်.့တကွ ကန်တော့ထိုက်သူ အားလုံးကိုရှိခိုးကန်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုအကောင်းမြင်ဝါဒလေးတွေရေးတဲ့ပိုစ့်တွေဆိုရင်ထောက်ခံသွား မှာပါ။လမ်းမီးတိုင်တွေမှာမီးချောင်းတွေအသစ်တပ်ပြီးပြီဆိုပေမဲံ့ဒါတွေကိုဖိုးသီးချိုတင်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော် တို. မြို့သူမြို.သားတွေကလည်းထိန်းသိမ်းရမှာပါ။ ဖိုးသီးချိုဆီမှလုယူရန်ကြိုးစားထိုးနှက်နေကြတာသိသာပါတယ်။ ယခုပို့ စ်ကိုတင်ကြသူတွေက တော့ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်လေးဟာအမှန်ပါ။ ဒါကိုသံတွဲသားတွေသတိထားကြဖို့.ထပ်ဆင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။။။။။။။
ဒါမျိုးလေးတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လေ…. သူဂျီးမင်း အာဏာတကယ်ရှိသကိ်ုးးးးးးး :shock:
ကြားပဲကြားဖူးပီး ဒါမျိုးမတွေ့ ဘူးတော့ သူဂျီးအလကား အလကားသူဂျီးပဲလို့ အောက်မေ့ခဲ့တာ
တစ်ချို့လဲ အမြင်မှန် ရဖို့ တစ်ယူဇနာလောက်ဝေးနေသေးသလားမသိဘူး၊
အင်းပေါ့လေ ကျည်တောက် သဘောမျိုး ဖြစ်နေပုံလေး ၊
အသံကောင်းဟစ်လေ ယုံရခက်လေ ပေါ့၊
ဘယ်လောက်များ အကျိုးပြုနိုင်သလဲ စောင့်ကြည့်နေရတော့မှာ၊
ကိုယ့်ညီကို သံတွဲသားလူ့ ငနာ ချိုချဉ်ရေ…..
မှတ်ထားပေါ့ ဦးနှောက်ပါရင် ဝေးး
တခါလာလဲ. ဒီစကား၊နှစ်ခါမြောက်လဲ ထိုစကား
တုတ်ကြီးမောင် ဝေကာပေး၊နင့်တို့ အကောင့်တွေ ဝေးးးးးး
ဆရာလိုလို၊သဘာလိုလို လေသံပေး တဲ့ကောင်တွေလဲ တွေ့ နေရတယ်ဗျာ။ဂိတ်မှူးဇာတ်ပျက်ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ပေါနေပါလား။မှတ်လောက်အောင် သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် B ဆိုဒ်ဖွင့်ပေးမယ်။
phoekhwarchay…….မင်းမိုက်ရိုင်းတိုင်းငါတို.မမိုက်ရိုင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့ငါကမင်းတို့.လိုလိုက်ပြီး ရန်တွေ.မယ်ဆိုရင်သူကြီးကငါ့ကိုပိတ်မယ်။ငါကမင်းဒို့.လိုအကောင့်အများကြီးဖွင့်၊ အရှက်မရှိနာမည်တွေအမျိုး မျိုးပြောင်းပြီးဖွင်.မထားတဲ့အတွက်မင်းတို.နဲ့.လိုက်ပြီးမရိုင်းဘူးကွ။ ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ့ကွာ။။။
မောင်တုတ်ကြီး ၊ အာရက္ခမြေသား ၊ Thantwethar တို့ရေ ။ ခင်ဗျားတို့ကလဲခက်တယ်ဗျာ ။ ပိုစ့်အောက်မှာပိုစ့်နဲ့မဆိုင်တာတွေမရေးကြပါနဲ့ ။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဖက်ပြိုင်ပြောမနေတော့ပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အရမ်းရှက်တတ်တယ် ။ မန်းဂေဇက်ထဲမှာ သဂျီးအပြစ်ပေးခံရတဲ့သူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိဘူးလဲ ။ မေးကြည့်လိုက်ပါဦး ။ အရင်တစ်လောကဖြစ်သွားတာတွေအရမ်းရှက်စရာကောင်းတယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘစစ်စစ်တွေကပေါက်ဖွါးလာတဲ့ သားသမီးတွေပဲဗျာ ။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနေကြရအောင်ဗျာနော် ။ မောင်တုတ်ကြီး ၊ အာရက္ခမြေသား ၊ Thantwethar တို့အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာဘေးဘယာဝေးကွာကြပါစေဗျာ ။ ပိုစ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအားသာချက် ၊ အားနည်းချက်လေးတွေကိုပဲ ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။ ကြားထဲကနာမည်မပျက်ချင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ ။ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ လိုရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ ။
ရိုးးးး ကိုဝေးလွင့်တိမ်ရေ. အကိုကတော့ပြောနေကျတိုင်း အာရက္ခမြေသား၊မောင်တုတ်ကြီး၊သံတွဲသားတို့ ကိုဘဲ လက်ညှိုးထိုးနေပါလား။တကယ်တော့ အပေါ်က ဖိုးခွားချေက အဆဲတပိုင်းနဲ့ အမိနဲ့ သား၊မောင်းရင်းနှမ မကြားသာအောင် ဆဲဆိုနေတာကို တခွန့် မှမတားပါဘူး။ဒါက ဘာသဘောပါလဲ။မမြင်တာလား၊မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ။
အခု..အပေါ်ကမန်းတာတွေမှာ … ဖျက်ထားတာတွေက.. အယ်ဒီတာအနေနဲ့.. တခြားရွာသားတွေ၇ဲ့..ရပ်တည်မှုအပေါ်.. ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ…၀င်ရောက်ဆုံးဖြတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်လို့ ..ယူဆလို့ပါ..။
ရွာသားတယောက်က.. တခြားတယောက်အပေါ်.. ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် အခွင့်မရှိပါကြောင်း.. သတိပေးလိုရင်းပါ..။
မောင်မိုးဒီအနေနဲ့ ကိုခိုင်ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့်. ထင်မြင်ချက်ပေးလို့ မရတာကိုတော့ သဘောမခွေ့ လှဘူးဗျာ။မဟုတ်တမ်း တရား၊သွားပုတ်လေလွင့်ပြောနေတာ တွေကိုရပ်မယ်၊အပြုသဘောဆွေးနွေးကြမယ့် ညီအကို၊နှမတွေကိုအားပေးရမယ်၊ဖျက်စီးသူကို တိုက်ထုတ်ရမယ် ဒါတာဝန်ဘဲမဟုတ်လားဗျာ။